कस्तो होला हलिउड फिल्मबाट प्रभावित ‘शेरबहादुर’ ? « Ramailo छ
कस्तो होला हलिउड फिल्मबाट प्रभावित ‘शेरबहादुर’ ?
समय : 4:40 pm
माघ १९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘शेरबहादुर’ हलिउड फिल्मबाट प्रभावित भएको खुलाइएको छ । मंगलबार आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा निर्माण पक्षले यो रहस्या सार्वजनिक गरेको हो । ‘कुन हलिउड फिल्मबाट भन्ने कुरा चाहिं ‘शेरबहादुर’ हेरेपछि नै थाहा हुन्छ’, फिल्मको क्रियटिभ डिरेक्टर प्रदीप भट्टराईले भने ।
‘शेर बहादुर’ मा वरिष्ठ कलाकार सुनिल थापा शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । नजिकिएको प्रदर्शन मितिलाई लक्षित गर्दै मंगलबार फिल्मको प्रेसमिट गरिएको हो । जहाँ सुनिल थापा, कर्म, मेनुका प्रधान, रविन्द्र झा, क्रियटिभ डिरेक्टर भट्टराई, निर्माता गौरी शंकर धुजु, वितरक गोपाल कायस्थ लगायत उपस्थित थिए । फरक कथा वस्तुमा फिल्म बनेकाले दर्शकले रुचाउने टिमले विश्वास व्यक्त गरे । फिल्मको प्रोमो हेर्नुस् :